Meheri - Wikipedia
Meheri Ismail (Carab Saalax) Waa beel ama qabiil soomaaliyeed oo taarikh dheer ku leh ladagalankii gumeystihi taliyaniga iyo ingriska ee dalka haystay. Waa beel lagu yaqano nabada, dariswanaga iyo xiriir wanagsan ee kala dhaxeyo beelaha kale ee somaliyeed. Marka laga hadlayo dhaqashada xoolaha beesha waxay caan ku yihiin dhaqashada Geela, Ariga, lo'da iyo Fardaha.
Meheri waxay dagaan Maamulka Puntland badankood, waxaa kaloo ay dagaan Jubaland iyo Kilinka shanaad ee Itooboya. Beeshu boqolaal sano ka hor waxay ganacsi isugu socon jireen soomaaliya iyo wadamada carabta oo dhan. Waana dad ganacsato ahaan jiray ahna ilaa iyo hada, waa dad kii isku xiray soomaaliya iyo wadamada carabta iyo wadamada bariga iyo bartamaha afrika.
Iyo Nabadoone kale
Yusuf Cigaal Gudomiye kuxigenki barlamanka somaliya 1962.
Mawliid Xasan Faarax -former Chief of General Staff of the Somalia's Marine Forces, Taliyihii guud ee Cidamada Mariiniska Bada ee dawlada Soomaliya bur burkii ka hor.
Xildhibaan Mohamed Abdikaafi Mohamed member of parliament of somalia 2017 - ilaa hadda (2021)
C/rixmaan Shiinle Axmed - xubin ka mid ahayd ururkii xoraynta Soomaliya ee loo yaqaanay SYL (kamid maaha 13ka ururku kubilaabmay)
Xuseen Ciid - Duqii degmada Galkacayo dawladii Soomaliya bur burkii ka hor.
Cali Xareed - wasiir hore Wasaarada Caafimaad DFS sidoo kale soo noqday Wasiirka Wasaarada dalxiiska iyo duurjoogta DFS.
Said Husein Eid - Former minister of livestock and plants Somalia (2013-2016), wasiirkii hore ee Wasaarda Xanaanada xoolaha iyo Daaqa Soomaliya 2013-2016.
Col. Saciid Cabdi Barre - taliyahii saad ka ee Cidamada Dawlada Soomaliya .
Kornayl C/xukum Xoreeye - Taliyahii ciidanka isku dhafka Galkacayo.
Col Maxamed Aadan Gaas
Ganacsade Ali Gawl - xubin kamid ah sirdoonka Soomaliya kuna dhinyat qarax kadhacay Elite Hotel 2020
Dr. Mohamud (Shaywaal) dhakhtar ugu horayay oo somali ah oo ku takha khusa cudurada sanka iyo cunaha iyo dawayntooda
Reer caliboss ganacsatoyaal burburkii kahor ilaa iyo iminkana ka ab gobolka mudug
Engineer Maxamed Xasan Ciid oo ka mid ahaa Engineer xooga korontada Soomaliya qayb libaax ka qaatay.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Meheri&oldid=213831"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Luuliyo 2021, marka ee eheed 08:46.